Paths of Light Sanduuqa Dvd - Joornaalka Naqshadeynta
Sanduuqa Dvd Sida ugufiican ee loo qabto Wadooyinka gaagaaban ee iftiinka ee Zina Caramelo waxay ahayd in la hubiyo in DVD-ga uu haysto kiis qurux badan oo la jaan qaada. Baakaduhu waxay runtii umuuqdaan sidii laga soo jaray alwaaxyada oo loo sameeyay qaab CD. Dhanka, khadadyo kala duwan ayaa la arki karaa, oo u muuqda kuwa geedo yaryar oo ku koraya dhinaca kiiska. Dusha alwaaxdu sidoo kale waxay gacan ka geysaneysaa inay siiso muuqaal dabiici ah oo dabiici ah. Dariiqyada Iftiiminta waa cusboonaysiin xad dhaaf ah oo laga keenay kiisas badan oo loo arkay CD-yada 1990-yadii, kuwaas oo badanaa ka koobnaa caag aasaasiga ah oo ay ku jiraan xirmo warqad ah si ay u sharxaan waxa ku jira. (Qoraalka uu qoray JD Munro)
Magaca mashruuca : Paths of Light , Magaca naqshadeeyayaasha : Francisco Elias & Nelson Fernandes, Magaca macmiilka : Francisco Elias & Nelson Fernandes.
Sanduuqa Dvd Francisco Elias & Nelson Fernandes Paths of Light